(tonga teto avy amin'ny Japana)
Japàna (amin' ny fiteny japôney: 日本 Nippon na Nihon; anarana ôfisialy 日本国 Nihonkoku) dia firenena ao atsinanan' i Azia. Ireo firenena manodidina azy dia i Korea Atsimo sy Avaratra, Sina ary Rosia. Ireo nosy lehibe indrindra izay an' i Japàna dia i Honshu, i Hokkaido, i Kyushu ary i Shikoku. Ao amin' ireo nosy efatra ireo ireo ny 97 %n' ny mponina manontolon' i Japàna, izay miisa 126 tapitrisa mponina. Tokyo izay manana isa-mponina 30 tapitrisa no renivohitra ary tanàna lehibe indrindra ao Japàna ary eto amin' izao tontolo izao.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Japàna&oldid=1045821"
Voaova farany tamin'ny 18 Jiona 2022 amin'ny 16:24 ity pejy ity.